ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်သည့်အခမ်းအနားကို Sky Net မှ Delay ပြပေးခဲ. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်သည့်အခမ်းအနားကို Sky Net မှ Delay ပြပေးခဲ.
ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်သည့်အခမ်းအနားကို Sky Net မှ Delay ပြပေးခဲ.
Posted by ကို သာ on Jun 21, 2012 in Copy/Paste |4comments
အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်က Honorary Doctor of Civil Law ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်သည့်အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-AFP)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လန်ဒန်မြို့ရှိ London School of Economics and Political Science တက္ကသိုလ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထူးခြားသည်မှာ ထိုအခမ်းအနားကို Sky Net မှ Delay ပြပေးခဲ.ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥေ၇ာပ ခ၇ီးစဉ်အားအစိုး၇ပိုင်မီဒီယာများနှင်. Sky Net တို.မှမဖော်ပြခြင်း အတွက် ဝေဖန်မှုများအား တုံ.ပြန်ခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပထမဦးဆုံး Post မို.နားလည်ပေးကြပါ။ ကျေးဇူးပါ။
ကိုယ့်နိုင်ငံသားကနိုင်ငံ့ဂုဏ်ကိုဆောင်တာကို သူတို့က မုဒိတာမပွားနိုင်ဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ မကောင်းတတ်လို့ delay ဖေါ်ပြတာ။ တကယ်ဆိုရင် ဂုဏ်ယူတ၀င့်နဲ့ live တောင်လွှင့်ရမှာ။ ဒီသတင်းလေးပေးလို့ ကိုသာကိုကျေးဇူးပါ။
အခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုကနိုင်ငံသား တစ်ယောက်သာ အခုလို
ဂုဏ်ပြုချီးမြင့်ခံရရင် အဲဒီနိုင်ငံကလူတွေ ကျွက်ကျွက်ညံနေကြမှာပဲ
တော်သေးတာပေါ့ dela့ကပို့ ပေါ့